Flowers TV မှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖိုင်ပြောင်းခြင်းအရှိန်မြှင့်ရန် FileCatalyst ကိုအသုံးပြုသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ပန်းပွင့်တီဗီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ File Transfer အရှိန်မြှင့်ရန် FileCatalyst ဖြန့်ချထား
အော့တဝါ, ON - FileCatalyst, စီမံခန့်ခွဲဖိုင်လွှဲပြောင်းအတွက်Emmy®ဆုရရှေ့ဆောင်တစ်ဦးသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဦးဆောင်အရှိန်မြှဖိုင်လွှဲပြောင်းဖြေရှင်းချက်ပန်းတီဗီရွေးကောက်တော်မူပြီကြေညာလိုက်ပါတယ် FileCatalyst နိုဝင်ဘာလ 24, 1 တင်ဆက်, ကုန်ထုတ်စွမ်းအားမြှင့်တင်ရန်နှင့်၎င်းတို့၏ချန်နယ်သစ်, 2018 သတင်း၏ပစ်လွှတ်လွယ်ကူချောမွေ့ရန် Moosburg, ဂျာမနီအတွက်ဘန်ဂလို, အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ဌာနချုပ်အကြားရှိကဗီဒီယိုအကြောင်းအရာလွှဲပြောင်းနှင့်သူတို့၏ပလေးအောက်စက်ရုံအရှိန်အဟုန်မြှင့်ခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ရန်။
ပန်းပွင့်တီဗီဝိပဿနာမီဒီယာစီးတီး, Kochi မှာရုံးချုပ်တစ်ခုနိုင်ငံတကာမီဒီယာကျောင်းဝင်းကနေတစ်ဦး 24 နာရီလေးရာလမျယေဘုယျဖျော်ဖြေရေးတီဗီရုပ်သံလိုင်းဖြစ်ပါတယ် ကီရာလာ, အိႏၵိယ။ ပန်းပွင့်တီဗီဧပြီလ 2015 ကတည်းကလေပေါ်ခဲ့ခြင်းနှင့်မြောက်အမေရိကရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဆုပေးပွဲဖို့အသံလွှင့်အခွင့်အရေးကိုရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းပွင့်တီဗီကိုလည်း၎င်းတို့၏ပစ်လွှတ်၏ 10 လအတွင်းဒုတိယအကြိမ်ရုပ်သံလိုင်း, ပန်းပွင့်အင်တာနေရှင်နယ်၏ပစ်လွှတ်နှင့်အတူကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Malayali ပရိသတ်ကို၏စိတ်ထဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။
ဘန်ဂလို, အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ဌာနချုပ်နဲ့ Moosburg, ဂျာမနီမှာသူတို့ရဲ့ပလေးအောက်စက်ရုံအကြားအကြောင်းအရာပို့သောအခါ, ပန်းပွင့်တီဗီယခင်ကအချိန်ကုန်ဖြစ်စဉ်ကိုသောရိုးရာ FTP ကိုအခြေပြုဖိုင်လွှဲပြောင်းဖြေရှင်းနည်းများ, ရေးအတွက်။ သူတို့ကအဆင့်မြင့်ရိုးရှင်းသော, ယုံကြည်စိတ်ချရသော, လုံခြုံကြီးမသက်ဆိုင်အောင်းနေချိန်၏တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ် output ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအဖြေတစ်ခုလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပန်းပွင့်တီဗီကိုလည်းအလိုအလျောက်နှင့်အချိန်ဇယားဆွဲ features တွေလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါကိစ္စရပ်များကိုကျော်လွှားရန်, ပန်းပွင့်တီဗီရွေးချယ်တော်မူပြီ FileCatalyst , မြန်အောင်လုပ်လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖိုင်လွှဲပြောင်းပေးရန်။ သူတို့က installed Filecatalyst နှင့်တိုက်ရိုက် software ကို suite ကို, FileCatalyst တစ်ဦး 500 Mbps ထိ link ကိုအပေါ်ဂျာမဏီတည်နေရာမှာတိုက်ရိုက်ဆာဗာများနှင့် Filecatalyst client-side အလိုအလျောက်ပေးဖို့ Kerala တည်နေရာမှာ HotFolder client ကိုလျှောက်လွှာ။
FileCatalyst တိုက်ရိုက်, FileCatalyst'' s ကိုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဖြေရှင်းချက် Point-to-point file ကိုလွှဲပြောင်း accelerates ကြောင်းဆာဗာနှင့် client ကို applications များတဲ့ suite ကို, လွှဲပြောင်းမှုပိုမြန်ရိုးရာ FTP ကိုလွှဲပြောင်းထက်အဆရာနဲ့ချီတဲ့အမြန်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ FileCatalyst'' s ကိုဖြေရှင်းချက်ထိုကဲ့သို့သောအောင်းနေချိန်နှင့် packet ကိုဆုံးရှုံးမှုအဖြစ်ကွန်ယက်ကိုချို့ယွင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နှေးကွေးဖိုင်လွှဲပြောင်း၏ကိစ္စများအောင်မြင်သောတဲ့မူပိုင်ခွင့် UDP ကို-based ဖိုင်လွှဲပြောင်းနည်းပညာမူတည်ပြီး။
FileCatalyst Hotfolder အသုံးပြုသူများကရိုးရှင်းတဲ့သို့မဟုတ်မလိုအပ်သကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးအဖြစ်အလိုအလျောက်တာဝန်များကို configure လုပ်ပေးတယ်တဲ့ client ကို application ဖြစ်ပါတယ်။ clients လိုအလြောကျအွန်လိုင်းဖိုင်ဧရိယာများအနေဖြင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာသို့ဖိုင်တွေအဖြစ်ဒေါင်းလုပ်ဖိုင်တွေတင်ပြနိုင်ပါတယ်။
"ကျွန်တော်တစ်ဦးထက်ပိုသော bandwidth ကိုအကျိုးရှိစွာနှင့်ကြံ့ခိုင်ဖိုင်လွှဲပြောင်းဖြေရှင်းချက်ဘို့ငါတို့လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းစိုက်ပျိုးထားပြီး, ဂျာမနီအတွက်ချန်နယ်သစ်နှင့်အသစ်ထုတ်လွှင့်စက်ရုံထည့်သွင်းရန်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြသကဲ့သို့" Anil Ayoor, ပန်းပွင့်တီဗီ၏အလုပ်အမှုဆောင် VP ကဆိုသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုများပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်, ငါတို့ဆိုပျော်ရွှင်နေကြသည် FileCatalyst ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးဖြေရှင်းလိုက်ပါတယ်, သူတို့ပန်းပွင့်တီဗီကျွန်တော်တို့ရဲ့နောကျအခနျးသို့ကြီးထွားကူညီပေးပါမည်။ "
"ဒီမီဒီယာနှင့်ထုတ်လွှင့်အာကာသအမြဲဗီဒီယိုကိုအကြောင်းအရာရွေ့လျားနှင့်အတူစိန်ခေါ်နှင့် OTT နှင့် high-definition ကို formats ကတော့ဖြစ်လာအတူထားပြီး '' စံ '' ဒီစိန်ခေါ်မှုကြီးထွားဖို့ဆက်လက်," အလန် Atkinson များအတွက်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု & Marketing ကို၏ VP ကပြောပါတယ် FileCatalyst.
"ကျနော်တို့ကသိမြင်ဖို့ပျော်ရွှင်နေကြသည် FileCatalyst မြန်ဆန်လုံခြုံပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောဖိုင်လွှဲပြောင်းဖြေရှင်းချက်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကိုထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ စေလွှတ်ကတည်းက FileCatalyst, ပန်းပွင့်တီဗီချက်ချင်းသူတို့ရဲ့အများဆုံးလိုင်းအမြန်နှုန်းမှာဖိုင်ကို file တွေကိုပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်ထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်ခဲ့, "QC Infotech ၏ဒါရိုက်တာဆန်နီယောဟနျ, ကပြောပါတယ် FileCatalyst'' s ကိုအိန္ဒိယတွင်ရုပ်သံလိုင်းဖက်။
FileCatalyst လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖိုင်လွှဲပြောင်းအရှိန်အဟုန်မြှင့်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲဖို့ဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ FileCatalyst အောင်းနေချိန်နှင့် packet ကိုအရှုံး FTP, HTTP ကိုသို့မဟုတ် CIFS အပါအဝင်ရိုးရာဖိုင်လွှဲပြောင်းနည်းလမ်းများအပေါ်ရှိသည်သောဆိုးကျိုးများမှကိုယ်ခံစွမ်းအားဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကိုသုံးပါ FileCatalyst အကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူး, ဖိုင်ခွဲဝေမှုများနှင့်ပြင်ပ Backup တွေကိုအပါအဝင်လွှဲပြောင်း file နှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စများဖြေရှင်းရန်။ ပိုပြီးအလည်အပတ်ခရီးသင်ယူဖို့ www.filecatalyst.com သို့မဟုတ် Twitter ပေါ်တွင် @FileCatalyst.
ကီရာလာအတွက်အစစ်အမှန်ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှု၏အရသာကို Apprehending, ပန်းပွင့်တီဗီဖန်သားပြင်ပေါ်မှာတစ်အမြင်အာရုံအဘို့ဆောင်သောပွဲဆင်ယင်။ တစ်ဦးလတ်ဆတ်ကြည့်နှင့်ခံစားရတယ်, ပရိုဂရမ်အမျိုးမျိုးနှင့်အတူပန်းပွင့်တီဗီ 10 လအတွင်း၏သေးငယ်တဲ့ကာလအတွက်ပန်းပွင့် International ၏ပစ်လွှတ်နှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း Malayali ပရိသတ်ကို၏စိတျဆှဲ။
အဖြစ်မှန်ပြပွဲ၏အမျိုးအစားများတွင်ပန်းပွင့်တီဗီစတားစိန်ခေါ်မှု, Smart ဘယ်လို, ဟာသစူပါ Nite နှင့်အိန္ဒိယဂီတအဖွဲ့ချုပ်နဲ့တူအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရှိုးပွဲအမျိုးမျိုးစုစည်းထားသည်။ ဤရွေ့ကားပြပွဲပစ္စုပ္ပန်နှင့်ပြိုင်ပွဲဝင်အဖြစ်ရုပ်မြင်သံကြားမှလာမယ့်သူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်ကြယ်ပွမြင်ဘူးသောသူတို့၏ပရိသတ်ကို၏အနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့သည်။
2015 ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ မိုဃ်းတိမ်ကို ဒေတာခွဲဝေမှု တည်းဖြတ်ခြင်း ဖျော်ဖြေရေး အစာရှောင်ခြင်းဖိုင်မှတ်တမ်းလွှဲပြောင်း ဖိုင်မျှဝေခြင်း ဖိုင်လွှဲပြောင်း FileCatalyst ပန်းပွင့်တီဗီ H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ အိႏၵိယ isovideo JCT-VC ကို သတင်း ဆူညံသံလျော့ချခြင်း ဝေးလံခေါင်သီလုပ်ငန်းအသွားအလာ Software များ TV တီဗီနည်းပညာ UHD / 4K / HD ကို viarte ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် Warsaw ကို 2018-10-25
နောက်တစ်ခု: က CP ဆက်သွယ်ရေး Fortnite နွေရာသီစကီးမစ်ရှ်လွှမ်းခြုံများအတွက်အကွိမျမြားစှာကွန်ယက်အဖွဲ့ topology လျှောက်